नेपालगञ्जले पाउँदै छ नयाँ ‘लक्जरी मल्टिप्लेक्स हल’, ‘टार्गेट’ नेपाली र भारतीय दर्शक - Nepalgunj Business
निर्माणाधिन फिल्म हल् ।
नेपालगञ्ज २५ भदौ -वेष्र्टन आईएनसी प्रालिले नेपालगञ्जमा निर्माण गरिरहेको ‘लक्जरी मल्टिप्लेक्स हल’ ‘सेनी रोयल’ मंसिरबाट सञ्चालन आउने भएको छ । आदर्शननगर चोकमा रहेको स्नेह होटलको छेउमा उक्त हलको पूर्वाधार धमाधम बन्दै छ । आगामी मंसिर महिना भित्र हल शुभारम्भ गर्ने गरी काम भइरहेको सञ्चालक डा. राहुल थापाले जानकारी दिनुभयो । तीनवटा स्क्रिन सहितको सेनी रोयलमा ‘साउण्ड सिस्टम’, ‘प्रोजेक्सन’ र बस्ने सुविधा हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका मल्टिप्लेक्स हल भन्दा राम्रो रहने दावी गरिएको छ ।
दुईवटा स्क्रिन २ सय ५० क्षमताको र अर्को १ सय ५० क्षमताको उक्त पिःलम हलमा ‘थ्रीवोय डब्ली एटमस साउण्ड सिस्टम’ र प्रोजेक्सन ‘फोर के लेजर प्रोजेक्टर’ मा आधारित हुने छ । बस्ने सिट मलेसियन कम्पनीसंग समन्वय गरेर बिशेष सुविधायुक्त बनाइदैछ । ‘एउटा सुविधा सम्पन्न फिल्म हलका लागि चाहिने भनेकै साउण्ड सिस्टम, प्रोजेक्सन र सिटिङ्ग हो । यि तीनवटा कुरा उत्कृष्ट बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’– डा. थापाले भने ।
चर्चित हाडजोर्नी रोग बिशेष डा. बिनोद थापाका छोरा राहुलको योजना अनुसार नेपालगञ्जमा उक्त सुविधा सम्पन्न हल बन्दै छ । नेपालगञ्जमा केही नयाँ हुनुपर्छ भन्ने सोंच आएपछि उनले खाली रहेको आफ्नो जग्गामा फिल्म हल बनाउने योजना बुनेका थिए । एक वर्ष पहिले एमबिबिएस पास गरेरका थापा अहिले बिहानदेखि साँझसम्म विरामीको सेवा गरिरहेको भेटिन्छन् । फुर्सदको समयमा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ कस्तो र कसरी बनिरहेको छ भन्ने हेर्न ‘साईट’ पुग्छन् ।
‘हल शुभारम्भ गर्दा जोकोहीले वाहा ! भन्ने होस् । नेपालगञ्जलाई तीन महिना पछि उत्कृष्ट सिनेमा हल दिने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ नेपालगञ्ज बिजनेशसंगको कुराकानीमा थापाले भने । उनले सेनी रोयल नेपालका अहिले सञ्चालनमा रहेका फिल्महल भन्दा उत्कृष्ट प्रविविधियूक्त बन्ने बताए । डा. थापाले भने,–‘देशभरका फिल्म हलको अध्ययन गरेका आधारमा भन्नुपर्दा हाम्रो हल बिशेष प्रविधियुक्त बन्दैछ ।’
सेनी रोयलले भारत र नेपालका दर्शकलाई भित्रा्उने ‘टार्गेट’ गरेको छ । उत्तर प्रदेशको बहराईजसम्मका दर्शक भित्रा्उने योजना छ । त्यसका लागि मार्केटिङ्ग समेत गरिने जानकारी दिदै डा. थापाले भने,–‘नेपालगञ्जमा एउटा उत्कृष्ट फिल्म हल बनेपछि नेपाल मात्र होइन भारतका दर्शक समेत भित्रा्उँछौ । त्यसका रणनीति पनि बन्छन् ।’ फिल्म हलको ‘इन्टरियर डिजाईन’लाई बिशेष ख्याल गरिएको छ । त्यसका लागि डा थापाले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेका छन् । उनका अनुसार फिल्महलसंगै नेपाली मौलिक परिकार र सामान पाईने ‘स–साना स्टल’ रहने ‘कम्पलेक्स’ समेत बन्दै छ । फिल्म हलमा आउने भारतीय दर्शकलाई लक्षित गरी नेपाली मौलिक परिकार र समान विक्रीका लागि राखिनेछ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ २५, २०७६ 3:11:31 PM